ANDROID ALERT: Phishing ကိုသတိထားပါ၊ | Androidsis
Francisco Ruiz | | NOTICIAS, လုံခွုံရေး
ကျနော်တို့တစ် ဦး နှင့်အတူပြန်လာ Android သတိပေးချက်, ဒါမှမဟုတ်တူညီတဲ့ကဘာလဲတစ် ယေဘုယျအားဖြင့်သတင်းခေါင်းစဉ်လုံခြုံရေးအကျပ်အတည်းမှနည်းပညာလောကနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်တွင်ဖက်ရှင်ဖြစ်နေပုံရသည့်ပူပြင်းသည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာပိုင်းအရလူသိများသောအရာဖြစ်သည် phishing.
တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားတွင်တောမီးလောင်ကျွမ်းသည့်ပြန့်နှံ့နေသောလှည့်စားမှုသည်ရာနှင့်ချီသောအသုံးပြုသူများကိုကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့်သက်ရောက်စေလျက်ရှိသည်။ Phishing ဆိုတာဘာလဲအတိအကျဘာကိုသိချင်တာလဲ။ ဒီလိမ်လည်မှု (သို့) ဒီတံဆိပ်ခေါင်းအတုကြီးတွေကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။။ ကောင်းပြီ၊ ဒီစာကိုဆက်ဖတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင့်ကိုအရာအားလုံးကိုရှင်းပြတာအပြင်၊ ရာပေါင်းများစွာသောအသုံးပြုသူတွေကျဆင်းနေတဲ့ထောင်ချောက်ထဲမကျမိအောင်အဲဒါကအရမ်းအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ငါသေချာတယ်။
1 ဒါပေမယ့် Phishing ဆိုတာဘာလဲ။
2 ဒီလိမ်လည်သူတွေက Phishing လိမ်လည်မှုနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံသလဲ။
ဒါပေမယ့် Phishing ဆိုတာဘာလဲ။
လူတိုင်းနားလည်နိုင်သည့်ရှင်းလင်းသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုခြင်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ဤဗွီဒီယို post သည်ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်လိုသောစမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသူများကိုမည်သည့် operating system ကိုမဆိုသတိထားစေရန်။ Phishing သည်ဆိုက်ဘာရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူများသည်ဘဏ်၊ ငွေစုဘဏ်၊ အမေဇုံ၊ ဂူဂဲလ် (သို့) Correos Spain ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။.
ထို့ကြောင့် Phishing သည်သုံးစွဲသူအားလှည့်ဖြားရန်နှင့်ဘဏ်၏စကားဝှက်များ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်များနှင့်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲဤအကောင့်များကိုရယူရန်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုရယူရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ခိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည် ယေဘုယျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်စာရင်းများမှငွေသားထုတ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီလိမ်လည်သူတွေက Phishing လိမ်လည်မှုနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံသလဲ။
ဤအလိမ်လည်သူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲ ဖွဲ့စည်း cybercriminal မာဖီးယားဂိုဏ်း, ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် SMS စာတိုများမှတဆင့်ဆောင်ရွက်သည် အပေါ်ပုံတွင်ငါထားခဲ့သကဲ့သို့ သူ၏ Twitter အကောင့်မှ Q12 မှ Toni Cano မှမျှဝေထားသောပုံသည်.
ဒီမက်ဆေ့ခ်ျများကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များဖြစ်ကြသည် ယေဘူယျစည်းမျဉ်းအရ၎င်းတို့အားလုံးသည်သင်မက်ဆေ့ခ်ျတွင်ချိတ်ဆက်ထားသည့် link ကိုနှိပ်ရန်သင့်အားကြိုးစားသောဘုံစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာသည်။သင့်အား ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတုသို့လွှဲပြောင်းရန်သူတို့ကစီစဉ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်၎င်းတို့နှင့်ဆက်သွယ်လိုသည့်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခု၊ သင်၏ဘဏ်သို့မဟုတ်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမျှ SMS သို့မဟုတ်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဤအီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းများဖြင့်မည်သည့်အခါမျှတောင်းဆိုမည်မဟုတ်သောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတောင်းခံမည့်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်တူသည်.
အဲဒါကိုပြောစရာမလိုပါဘူး ဒီ link မှာကမ္ဘာပေါ်မှာဘာမှမလုပ်သင့်ပါဘူးဒီတော့၊ ဒီစာမူထဲမှာငါပြခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့အနည်းဆုံးဆင်တူတဲ့ SMS၊ အီးမေးလ်၊ WhatsApp (သို့) တယ်လီဂရမ်စာကိုသင်လက်ခံရရှိတယ်၊ အထူးသဖြင့်၊ URL အတိုကောက်ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဆိုရင်၊ သင်လုပ်ရမှာကအဲဒါကိုဖြတ်ပြီးဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ သင်၏ terminal ၏အမှိုက်ပုံးသို့တိုက်ရိုက်၎င်း။ ရဲ့အမှိုက်ဘူးကိုဖြောင့်သွားကြကုန်အံ့ !!
ငါပို့စ်ရေးနေစဉ်မှာပင်ထိခိုက်နစ်နာမှုများစွာရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ WhatsApp, Twitter, Facebook စသည်ဖြင့်လူမှုကွန်ယက်အားလုံးသို့သတင်းရောက်ရှိနေသည်။ ဤနေရာတွင် Correos Españaကိုအယောင်ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းသည့်ဥပမာတစ်ခုကိုဒီမှာပြခဲ့သော်လည်း၊ Bankia၊ BBVA, Banco de Sabadell နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သောဘဏ်လုပ်ငန်းများအစားထိုးရန်ကြိုးစားနေသည့်အလားတူသတင်းစကားများကိုသူတို့ကတင်ပြပြီးရှုတ်ချလိုက်သည်.
ငါသည်ဤပို့စ်ရဲ့အစမှာငါလက်ျာဘက်ထားခဲ့သောဗီဒီယိုတွင် ငါဒီလိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် Phising အမျိုးအစားလိမ်လည်မှုကိုနားလည်ရန်ပိုမိုရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ရှင်းပြသည်, ဒါကြောင့်ငါကပိုအသိပေးဖြစ်ကြည့်ရှုရန်နိုးနိုးကြားကြားရှိရန်သင့်အားအကြံပေးသည်၊ အဟောင်းနှင့်ပညာရှိလူကြိုက်များသည့်နယပုံပြင်ကဆိုသည်အတိုင်းသူတို့သည်ဒိန်ခဲဖြင့်သင့်ကိုမပေးစေရန်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ANDROID ALERT: Phishing ကိုသတိထားပါ၊
Buenas tardes ။ သင်၌ကြီးမားသောအမှားတစ်ခုရှိကြောင်းသင့်အားပြောပြရန်ငါရေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်“ phishing” ဟူသောစကားလုံးသည်“ phishing” မဟုတ်သောကြောင့်၊ ဆောင်းပါးနှင့်ရုပ်ပုံများရှိဆိုဒ်များတွင်မှားယွင်းစွာရေးသားထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးလေးပါ။
သင်၏ Xiaomi ကိုအခြားမည်သူမဆိုမွမ်းမံနိုင်သည်